Webiga Shabeelle oo raxmada EEBE keenay iyo khasaare ka dhashay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Webiga Shabeelle oo raxmada EEBE keenay iyo khasaare ka dhashay
Iyadoo baryahan ay jirtey abaaro baahsan oo gobolada dhexe iyo kuwa Woqooyiga dalaba hareeyay ayaa Wabiga Shabeelle keenay raxmada Eebe. Wabiga ayaa ka fatahay deegaanka Buulo Axmed Cigow oo duleedka ka ah degmda Mahadaay, isla markaana uu khasaaro gaarsiiyay Beero ku yaalla tuulada uu ka fatahay,sidoo kale uu Wabiga gooyay Beeraha.
Dad ku sugan degmada Mahadaay ayaa waxaa ay sheegeen in Wabiga dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay ku soo kordhayeen biyo, taas oo keentay in ugu dambeyn uu xalay fatahaad ka sameeyey tuulada Buulo Axmed Cigow .
Wabiga ayaa gebi ahaanba baabi’iyay beero ay ku abuurnaayeen dalagyo kala duwan, sidoo kale guryo ay deganaayeen dad Shacab ah uu burburiyo.
Sanadkiiba tira laba jeer oo kala ah Gu’ga iyo deyrta oo uu roobka da’o ayuu fatahaad ka sameeyaa deegaano ka tirsan labada Shabeelle taas oo keenta in dad badan ay ka barakacaan deegaanada uu ka fataho.